Booliska UK oo baadi goobaya Nin Soomaali ah
Tuesday September 10, 2019 - 15:00:37 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Booliska Magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska ayaa raadinaya Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdi Cali,kaas oo lagu tuhmayo in uu dil geystay.
Cabdi ayey Booliska ku eedeeyeen dil loo geystay Shaun Lyall oo la dilay 18kii july sanadkii hore.
Wargelin ay soo saareen Booliska UK ayey ugu baaqeen in Cabdi oo 29 jir ah ciddii aragta la xiriirto Booliska.
Waxaa ay Boolisku sheegeen in uu midkood ku dhuumaaleysanayo Magaalooyinka kala ah; Sheffield, London, Lancashire, South Yorkshire, Merseyside, Manchester, Milton Keynes, Lincolnshire, iyo Cleveland.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in Cabdi oo ka soo jeeda Soomaaliya uu halis yaay waxaana ay dadka uga digeen in ay qabashadiisa isku dayaan.
Saraakiisha Amaanka ayaa sheegay in Ninkan uu ku dhuumanayo magaalooyinkaas sare midkood dadkana laga codsanayo in haddii ay arkaan ay la xiriiraan lambarrada gaaban ee Booliska.